यो दशैको पूर्णीमा इतिहासकै शुभ : ३० बर्षपछिको यो महासंयोगमा यी कार्य गरे कहिलै हुने छैन धनको कमी « Janaboli
यो दशैको पूर्णीमा इतिहासकै शुभ : ३० बर्षपछिको यो महासंयोगमा यी कार्य गरे कहिलै हुने छैन धनको कमी
काठमाडौँ । यो वर्ष, शरद पूर्णिमा एक शुभ अवसर बन्ने भएको छ । ज्योतिषाचार्य पं. प्रफुल्ल भट्टका अनुसार असोज २६ गते आइतवार शरद पूर्णिमा लगभग ३० बर्ष पछि महालक्ष्मी योग बन्ने भएको छ। यो शुभ योग चंद्र र मंगल बीच दृश्य सम्बन्ध राखेर गठन गरिएको हो। जसलाई महालक्ष्मी योग भनिन्छ । शरद पूर्णिमामा यो शुभ योगको बनेसंगै यो चाड अझ विशेष हुनेछ ।
असोज महिनाको यो पूर्णिमालाई कोजागरी पूर्णिमा पनि भनिन्छ । यस्तो विश्वास गरिन्छ कि देवी लक्ष्मी यस तिथिमा पृथ्वीको भ्रमण गर्छिन् र देवीका भक्तहरु र देवीको पूजा गर्ने व्यक्तिसँग देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । यस शरद पूर्णिमामा महालक्ष्मी योगमा देवीको पूजा गर्ने सुअवसर ३० बर्ष पछि आएको छ । यसै कारणले यो वर्ष शरद पूर्णिमामा स्वास्थ्यको साथसाथ आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार हुँनेछ ।
यस वर्ष शरद पूर्णिमामा, चन्द्रमा मीनमा हुनेछ र मंगल ग्रह कन्यामा हुनेछ। यस तरीकाले दुबै ग्रहहरू आमने सामने रहने छन्। मंगल ग्रह त्यहाँ हस्त नक्षेत्रमा रहनेछ । जुन चन्द्रमाको स्वामित्वमा रहेको नक्षेत्र हो । यसभन्दा पहिले ग्रहहरूको यस्तो अवस्था १४ अक्टोबर १९८९ मा भएको थियो । यद्यपि ६ अक्टुबर २००६ र २० अक्टोबर २००२ मा पनि चन्द्रमा र मंगल ग्रहको अवलोकन गरिएको थियो, मंगल ग्रह चन्द्रमाको तारामंडलमा थिएन। यी बाहेक, चन्द्रमामा बृहस्पतिको दर्शनका कारण, गजकेसरी नामक अर्को शुभ योगको पनि बनिरहेको थियो ।
पोखट्ट भट्टका अनुसार पूर्ण तिथि र महालक्ष्मी योगका कारण शारद पूर्णिमामा किनमेल गर्न र नयाँ काम सुरु गर्नु शुभ हुनेछ । यस शुभ संयोगमा सम्पत्ति, लगानी र महत्वपूर्ण लेनदेनबाट सम्पत्ति पाउने सम्भावना बढ्नेछ। सबै दिन रोजगार र व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिको लागि लाभदायक हुनेछ। यससँग, बचत पनि बढ्नेछ। यो दिन नयाँ उत्तरदायित्व लिनका लागि पनि राम्रो रहनेछ । यस दिनमा गरिएको काम लामो समयको लागि लाभदायक हुनेछन् ।
शरद पूर्णिमामा के गर्ने
यस रातमा लिइएको औषधीले धेरै चाँडो फाइदा पुर्‍याउँनेछ। शरद पूर्णिमामा चन्द्र किरणले पनि हामीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। त्यसकारण, कोहीले यो रातमा केही समय बस्नु पर्छ । यसले दिमागलाई शान्ति बनाउने छ र तनाव हटाउन सहयोग गर्ने छ । शरद पूर्णिमाको रात घरमा बाहिर बत्तीहरू बाल्नु पर्छ। यसले घरमा सकारात्मकता बढाउँदछ। शरद पूर्णिमाको चन्द्र खुल्ला आँखाले हेर्नुपर्छ किनकि यसले आँखाको समस्यालाई हटाउने छ । व्रत बस्ने व्यक्तिले चन्द्रमालाई अर्घ दिए पछि मात्र खाना खानु पर्छ ।
काठमाडौं। वेद किन पढ्ने, चारवटा वेदमा के छ त्यस्तो ? हिन्दू सभ्यताको सबैभन्दा प्रचीन ग्रन्थ हो
मानिसको जन्मेको समय र उसको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । कुन बालक कुन
हेलचेक्र्याई नगर्नुहोस् यी ४ पेसा भएकाले यस्ता रङ्गका जुता भुलेर पनि नलगाउनुस् , अशुभ हुन्छ
काठमाडौ । ज्योतिशी शास्त्र अनुसार मानव जीवनमा सम्बधित केही यस्ता कार्यहरु अशुभ मानिएको छ ।
काठमाडौ । बिबाहित महिलाले मात्र सिन्दूर लाउने हाम्रो हिन्दू धार्मिक परम्परा रहेको छ । सिन्दूर